Misoro yeNhau dzaNhasi, Muvhuro, Chikunguru 10, 2017
Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyangwe asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwara. Asi mubato reZanu-PF muri kuita kunetsana kunotyisa.
Zimbabwe Electoral Commission inoti yabhadhara chimwe chikamu chemari yekutenga michina yeBVR kuLaxton Group uye ichatanga nekudzidzisa vanhu vachazodzidzisawo vamwe kushandisa michina yacho mumatunhu ose vanhu vasati vatanga kunyoreswa.
Sangano reThis Constitution, Our Constitution roendesa tsamba yenyunyuto kuZEC nenyaya yekuti vanhu vaunze mapepa ekwavanogara kuti vakwanise kuvhota.
Bato reNCA rinoti gadziriro yesarudzo dzayo dziri kufamba zvakanaka musarudzo dzeby-elections dziri kuitwa kwaChiundura kutsiva mushakabvu Kizito Chivamba.
Mutungamiri weZIFA VaPhilip Chiyangwa vokurudzira vanhu kuti vaende kunhandare yeHarare Airport mangawana kunochingamidza vatambi vemaWarriors avo vakasimudza mukombe weCOSAFA nezuro mushure mekurova Zambia.
Muchirongwa che LiveTalk na8pm tiri kutarisa kusimudza mukombe weCOSAFA Cup kwakaitwa neZimbabwe nezuro.